Kuukuuyada Ina Dawaare yaa soo kiraystay | POHSOMEV.COM
posted by admin on Wed, 03/21/2018 - 22:59
21st March 2018 admin Category :
Madaxweyne Gaas Shacabka Puntland ayaa doortay, haybadiisa, sharaftiisa iyo wanaagiisu waa astaanta Puntland. Haddii xilka loo doortay uu ka soo bixi waayona waxay u taalaa shacabka Puntland oo keliya . Farax Macalin adigu Kuukuuyada iyo kenyaatioga aya kuu banaan inaad ka warantid.
Maalintaad Isaaq kuu soo gelbinayTuesday, 02 March 2010 14:46
Faarax Macalin Oo dhagartiisii Qirtay & Been Qaawan oo uu ka sheegay
Nairobi ( ALLSANAAG):-Faarax Macalin Dawaare oo ah Gudoomiye ku xigeenka Barlamaanka dalka Kenya ayaa wuxu qiray in uu doonayo in maamulka Hargaysa u ugu Ololeeyo Gooni goosadka ay la daala dhacayeen mudada 20ka sano ah.
Faarax Macalin Daawaare oo ah Gudomiye ku xigeen barlamaanka Kenya ayaa waxaa uu BBC da Laanteeda afka Soomaaliga ah siiyey waraysi ku saabsan Dacwo ka dhan ah oo uu amray wasiirka Arimaha debeda ee Kenya Moses Watungala.
Faarax macalin wuxuu si cad u sheegay in uu Barlamaanka Kenya hordhigi doono warbixin ku saabsan waxa uu ugu yeedhay xaalada Somaliland, taasoo uu ula jeedo in uu ka helo barlamaanka Kenya taageero oo ku fushado marshuuca uu ka soo qaatay Hargaysa.
Faarax macalin oo la sheegay in uu soo qaatay lacag $250,000 ah ayaa waxaa kaloo loo balan qaaday lacag intaas ka sii badan haduu ku gulaysto qorshahiisa.
Wuxuu sidoo kale hadal been iyo gaf ku ah ka sheegay shacabka SSC oo uu sheegay in ay kaga horyimaadeen Burco agteeda taasoo ah hadal meel ka dhac ku ah shacab ka la hasyto ee reer Laascaanood iyo sidoo kale bulsho weynta SSC. Mar wax laga waydiiyey in uu diidan yahay in *********** ka soo horjeedo maamulka Gooni goosadkla ah ayuu si jees jees ah islamarkaana yasi taan ah ku yidhi Meel kastaba mucaaradku waa ka jira iyo hadal Dulucdiisu ahayd in aysan saameyn lahayn dadka ka soo horjeeda Maamulka haysta Laascaanood oo la ogyahay in *********** dhaqan iyo shacab Caruur iyo Ciroole ka mideysan yihiin Midnimada Soomaaliya iyo iska dhicinta Maleeshiyada haysata Laascaanood.
Maxaad ka taqaana Faarax Dawaare?
Faarax Macalin Dawaare waa nin ku caanbaxay Dilaalnimada iyo danaysiga. Wuxuu can ku yahay in uu isticmaalo wajiyo badan oo dhawr nooc ah, wejiyada uu Isticmaalo wuxuu ku saleeya marba qolada uu la joogo. Waxaa la xasuustaa in uu 2006kii amrkii Maxkamaduhu qabsadeen Koonfurta Soomaaliya uu halkaas tegey isla markaana uu sitay Weji ah Soomaalinimo iyo in uu caalamka iyo Maxkamadaha isku xidhayo. Wuxuuna halkaas ka helay lacag aad u fara badan oo uu ka qaatay wadadii uu ku yidhi waa la idin Aqoonsanayaa.
Lacag taas la mid ah na wuxuu ka diirtay Maraykanka iyo reer galbeedka oo uu u siday Magacyo dad ay doonayeen oo uu ka soo xuuraamay Mudisho. Taasi waxay dhaxal siisay in uu lacag badan ku bixiyo Dorashadiisii Xildhibaanimo iyo Gudoomiye ku xigeenimo taasoo uu ku gulaystey.
Wajiyada kale ee uu isticmaalo waxaa ka mid ah, Daarroodiya, Kablalaxiya iyo ********iya. Dhamaana arimahaas wuu ku qidhaabtaa mana jirto cid uu wax ugu qabto in uu ku dilaalaysto mooyaane.
Sidoo kale wuxuu Faarax Macalin caan ku yahay in uu iibsado sheekooyinka Siyaasadeed ee dhexmara asaga iyo qolyaha markaas uu isku Maansuukhinayo ee uu ka doonayo Sandareerada.